Ban: Weerarkii Dhacay Nama Hor-joogsan Doono
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon
Qaramada Midoobay ayaa balanqaadday inay garab is taagi doonto Soomaaliya, ka dib markii Shalay oo Arbaco aheyd la weeeraray xarunta Qaramada Midoobay ee Magaalada Muqdisho.
Weerarka maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 21 qof, kuwaasoo isugu jiray shaqaalaha hay’adda UNDP iyo maleeshiyadii weerarka soo qaadday oo tiradoodu aheyd 7 ruux.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon, ayaa isagoo Khamiistan ka hadlayey magaalada Beijing waxa uu sheegay in weerarada xun ee argagixisadu aaney Qaramada Midoobay horjoogsan doonin. Waxa uu sheegay in Qarmada Midoobay ay caawin doonto dowladda Soomaaliya iyo Shacabkeedaba si loo helo degenaansho siyaasadeed, iyo dhiirigelinta hormarinta iyo Xuquuqda Aadanaha.
Dhinaca kale, Golaha Ammaanka ee Qarmada Midoobay ayaa sheegay in weeraradu aaney waxba u dhimeyn go’aankooda ah taageerista xilliga kala guurka ee Soomaaliya si loo gaaro nabad iyo kala danbeyn.
Maalintii Arbacadana, Ururka Al-Shabaab ayaa hadal jees jees ah oo ay ku qoreen bartooda Twitter-ka, waxa ay isku weydiiyeen in ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u fadhiya Soomaaliya Nicholas Kay uu weli sii qorsheynayo inuu ku negaado Muqdisho iyo in kale.